Ɔhaw 5: nyɛmmoa wuwui (1-7)
Ɔhaw 6: mpɔmpɔ bobɔɔ nnipa ne mmoa (8-12)
Ɔhaw 7: asukɔtweaa (13-35)
Onyankopɔn bɛma Farao ahu ne tumi (16)
Yehowa bɛma nkurɔfo abɔ ne din (16)
9 Afei Yehowa ka kyerɛɛ Mose sɛ: “Kɔ Farao nkyɛn kɔka kyerɛ no sɛ, ‘Nea Hebrifo Nyankopɔn Yehowa aka ni: “Ma me nkurɔfo no kwan ma wɔnkɔsom me.+ 2 Na sɛ wokɔ so siw wɔn kwan na woamma wɔankɔ a, 3 ɛnde hwɛ, Yehowa de ne nsa+ bɛka wo nyɛmmoa a wɔwɔ wuram no. Na ɔbɛma owuyare+ atew asi apɔnkɔ, mfurum, yoma, anantwi ne nguan nyinaa mu. 4 Na Yehowa bɛma nsonsonoe abɛda Israel nyɛmmoa ne Egypt nyɛmmoa ntam, na Israelfo mmoa no mu baako mpo renwu.”’”+ 5 Afei Yehowa hyɛɛ bere; ɔkae sɛ: “Ɔkyena na Yehowa bɛyɛ eyi wɔ asaase no so.” 6 Enti ade kyee no, Yehowa yɛɛ nea ɔkae no, na Egypt nyɛmmoa nyinaa bi fii ase wuwui,+ nanso Israelfo mmoa de, baako mpo anwu. 7 Bere a Farao bisaa mu no, ɔtee sɛ Israelfo no nyɛmmoa no mu baako mpo nwui. Nanso Farao kɔɔ so ara pirim ne koma, na wamma nkurɔfo no ankɔ.+ 8 Ɛnna Yehowa ka kyerɛɛ Mose ne Aaron sɛ: “Momfa mo nsa abien nsaw fononoo mu nsõ na Mose ntow mpete wim wɔ Farao anim. 9 Na ɛbɛyɛ sɛ mfuturu akata Egypt asaase nyinaa so, na ɛbɛdan mpɔmpɔ bɔne abobɔ nnipa ne mmoa wɔ Egypt asaase so baabiara.” 10 Enti wɔkɔsaw fononoo mu nsõ, na wobegyinaa Farao anim. Afei Mose tow petee wim na ɛdan mpɔmpɔ bɔne bobɔɔ nnipa ne mmoa nyinaa. 11 Na mpɔmpɔ no nti akɔmfo a wɔwɔ hɔ no antumi annyina Mose anim, efisɛ na mpɔmpɔ no abobɔ akɔmfo no ne Egyptfo nyinaa.+ 12 Nanso Yehowa maa kwan maa Farao pirim ne koma, na sɛnea na Yehowa aka akyerɛ Mose no, wantie wɔn.+ 13 Afei Yehowa ka kyerɛɛ Mose sɛ: “Sɔre anɔpatutuutu kɔ Farao anim, na ka kyerɛ no sɛ, ‘Nea Hebrifo Nyankopɔn Yehowa aka ni: “Ma me nkurɔfo no kwan ma wɔnkɔsom me. 14 Efisɛ merehwie mmusu nyinaa agu wo ne wo nkoa ne wo man so, na woahu sɛ obiara nni hɔ a ɔte sɛ me wɔ asaase nyinaa so.+ 15 Sɛ mepɛ a, anka ebesi saa bere yi mateɛ me nsa de owuyare abɔ wo ne wo manfo, na mayi* wo afi asaase so. 16 Nanso nea enti a mama woda so te ase ni: mepɛ sɛ meda me tumi adi kyerɛ wo, na mema nkurɔfo bɔ me din asaase nyinaa so.+ 17 W’ahomaso nti, woda so ara resiw me nkurɔfo no kwan sɛ woremma wɔnkɔ? 18 Ɔkyena sesɛɛ mɛma asukɔtweaa a emu yɛ duru atɔ, na efi bere a wɔkyekyee Egypt besi nnɛ ebi ntɔe saa da. 19 Enti soma kɔfa wo nyɛmmoa ne biribiara a wowɔ wɔ wuram bra bɛhyɛ fie. Onipa anaa aboa biara a ɔwɔ wuram a wɔamfa no amma fie no, asukɔtweaa no begu no so ma wawu.”’” 20 Farao nkoa a wɔfaa Yehowa asɛm no aniberesɛm no de wɔn nkoa ne wɔn nyɛmmoa baa fie ntɛm, 21 nanso wɔn a wɔamfa Yehowa asɛm anyɛ asɛm no gyaw wɔn nkoa ne wɔn nyɛmmoa wɔ wuram. 22 Afei Yehowa ka kyerɛɛ Mose sɛ: “Teɛ wo nsa kyerɛ soro na asukɔtweaa ntɔ ngu Egypt asaase nyinaa so,+ na emmegu nnipa, mmoa, ne afifide nyinaa so wɔ Egypt asaase so.”+ 23 Enti Mose de ne poma no kyerɛɛ soro, na Yehowa maa aprannaa ne asukɔtweaa ne ogya* pae guu asaase no so, na Yehowa kɔɔ so maa asukɔtweaa no tɔ guu Egypt asaase so. 24 Bere a asukɔtweaa retɔ no, na ogya nso repa yerɛwyerɛw. Ná ano yɛ den paa; efi bere a Egypt bɛyɛɛ ɔman no, na ɛso bi mmaa asaase no so da.+ 25 Asukɔtweaa no pae guu Egypt asaase nyinaa so. Ɛpae guu biribiara a ɛwɔ wuram so, efi nnipa so kosi mmoa so. Ɛsɛee afifide nyinaa, na ebubuu wuram nnua nyinaa.+ 26 Gosen asaase a na Israelfo wɔ so no nkutoo na asukɔtweaa no antɔ wɔ hɔ.+ 27 Ɛnna Farao soma kɔfrɛɛ Mose ne Aaron bae, na ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Afei de, mahu sɛ mayɛ bɔne. Yehowa teɛ, na me ne me man afom. 28 Monsrɛ Yehowa na Onyankopɔn aprannaa ne asukɔtweaa no nnyae, na mɛma mo kwan ma moakɔ; morentena ha bio.” 29 Enti Mose ka kyerɛɛ no sɛ: “Sɛ minya fi kurom ha a, mɛtrɛw me nsam wɔ Yehowa anim. Afei aprannaa ne asukɔtweaa no to betwa na woahu sɛ asaase yɛ Yehowa dea.+ 30 Nanso wo ne wo nkoa de, minim paa sɛ eyi mpo remma munsuro Yehowa Nyankopɔn.” 31 Nea esii no sɛee asaawa ne baali,* efisɛ na baali no adu bere a ɛsɛ sɛ wotwa, na asaawa no nso agu nhwiren. 32 Nanso hwiit ne kɔkɔte* de, ansɛe efisɛ na emfifi ntɛm.* 33 Na Mose gyaw Farao hɔ kɔe, na ofii kurow no mu kɔtrɛw ne nsam wɔ Yehowa anim, na aprannaa ne asukɔtweaa no to twae na osu no gyaee tɔ wɔ asaase no so.+ 34 Bere a Farao hui sɛ osu ne asukɔtweaa ne aprannaa no agyae no, ɔsan yɛɛ bɔne na ɔne ne nkoa koma yɛɛ den.+ 35 Enti Farao kɔɔ so pirim ne koma, na sɛnea na Yehowa nam Mose so aka no, wamma Israelfo no ankɔ.+
^ Anaa “matwa.”
^ Ɛbɛyɛ sɛ ɛyɛ anyinam a ano yɛ den.
^ Anaa “ɛtaa ka akyi.”